SEO သေပြီ | Martech Zone
သောကြာနေ့, ဧပြီ 6, 2012 သောကြာနေ့, မေလ 13, 2016 Douglas Karr
ငါတို့သိသည့်အတိုင်း SEO သည်သေပြီ။ တိုးမြှင့် backlinks နှင့် stuffing သော့ချက်စာလုံးများ၏အဟောင်းသင်္ချာယခုသင်တို့၏ site ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်နှင့်ရှာဖွေရေးရလဒ်များကိုအတွက်သင်္ဂြိုဟ်ရန် Google အတွက်ပစ်မှတ်ဖြစ်ပါတယ်။ SEO ဆိုတာသင်္ချာပြproblemနာမဟုတ်တော့ဘူး။ လူမှုရေးညွှန်းကိန်းများသည်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အတွက်သော့ချက်ဖြစ်လာပြီးချိတ်ဆက်မှုဆိုင်ရာ algorithms များကိုအငြိမ်းစားယူနေသည်။ SEO အတွက်အမှန်တရားကိုသင်တွေ့မြင်ပြီးလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ချိန်ရောက်ပြီ။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်တို့ဟာအာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆွဲဆောင်ရန်ကောင်းသော baity ခေါင်းစဉ်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ သို့သော်အချိန်တန်ပြီ တစ်စုံတစ်ယောက် ထရပ်ကပြောသည်။ ရိုးရာ SEO သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အတွက်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောဖြေရှင်းနည်းတစ်ခုမဟုတ်တော့ပါ။ လူ - ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များကိုလူအများအသုံးပြုနေဆဲဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များသည်ခိုင်မာသောမြန်ဆန်သောပလက်ဖောင်းများတွင်ရှိနေခြင်းကိုရည်ညွှန်းသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်သော့ချက်စာလုံးများကိုမည်သို့ညှစ်ရမည်သို့မဟုတ် backlinks ကိုလိုအပ်သည့်နည်းလမ်းများဖြင့်မည်သို့ရယူရန်ကြိုးစားပုံနည်းလမ်းဟောင်းကိုအသုံးမပြုတော့ပါ။
စစ်မှန်သော SEO package အသစ်သည် site optimization ထက် ကျော်လွန်၍ သွားသည် link ကိုအဆောက်အဦး နှင့်ပါဝင်သည် ပြောင်းလဲခြင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ သော့ချက်စာလုံးများကိုဆုံးဖြတ်ရန်၊ ဆွဲဆောင်မှုရှိသောအကြောင်းအရာများကိုရေးသားရန်၊ စာဖတ်သူများအနေဖြင့်ထိုအကြောင်းအရာများကိုမျှဝေရန်လွယ်ကူစေရန်၊ အများပြည်သူနှင့်ဆက်သွယ်မှုဆက်သွယ်ခြင်းကို အသုံးပြု၍ ထိုအကြောင်းအရာကိုမျှဝေရန်အခွင့်အလမ်းများကိုရှာဖွေရန်နှင့်ထိုအကြောင်းအရာမှထွက်ပေါ်လာသောအကြောင်းအရာများကိုမြှင့်တင်ရန်။
ဤတင်ပြချက်ကိုမူလကမကထပြုခဲ့ပြီး ၀ က်ဘ်ဆွေးနွေးပွဲမှတဆင့်ပြသခဲ့သည် အကျဉ်းချုပ်။ ဒီနေ့၏ပင်မစာမျက်နှာတွင်ဖော်ပြထားသည် Slideshare!
UPDATE 10/4/2012 - ဂူဂဲလ်သည်၎င်း၏ ၀ က်ဘ်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်များကိုအထူးသဖြင့်အဆင့်မြှင့်ထားသည် link ကိုအစီအစဉ်များကိုပစ်မှတ်ထား နှင့်ပေးဆောင်ခဲ့ကြသော link များအားလုံးအတွက် nofollow ကိုအကြံပြုခြင်း။
Tags: နောက်ကြောင်းပြန်keyword သိပ်သည်းဆသော့ချက်စာလုံးအသုံးပြုမှုသော့ချက်စာလုံးတွေseo အသစ်ပလက်ဖောင်းSearch ကိုစျေးကွက်seo သေပြီလူမှုရေးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးလူမှုရေးမြှင့်တင်ရေးရိုးရာ seo
ဧပြီ 6, 2012 မှာ 9: 14 pm တွင်
စာမျက်နှာပြင်ပလင့်များသည်အစွမ်းသတ္တိအများစုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည် အခုငါတို့စုဆောင်းဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ဒီ“ မဲ” တွေဟာလူမှုရေးခွဲဝေမှုပုံစံကိုရရှိခဲ့တယ်။
အမြဲတမ်းလိုပဲလူတိုင်းကိုလူတိုင်းမျှဝေချင်တဲ့အရာအားလုံးကိုလုပ်ပါ။ ဒါပေမယ့်အဲဒီမှာမရပ်ပါဘူး လူသားရဲ့ဒြပ်စင်တစ်ခုရှိဖို့လိုတယ်၊ ဥပမာအားဖြင့် Jason ကိုကြည့်ပါ။ သငျသညျ (သူ၏အစစ်အမှန်ကမ္ဘာလုပ်ရပ်များကြောင့်လည်း) သူနှင့်သူနှင့်ဆက်သွယ်လိုသည်။ သူဖန်တီးထားသောအရာအားလုံးကိုမျှဝေချင်သည် - နောက်ဆုံးတွင်သူ့အားအကျိုးပြုမည့်ပြောင်းလဲမှုအချို့ကို ဦး တည်စေသည်။ (သို့မဟုတ်သင်)
သင်ဟာ Google ရဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအရဘယ်လိုကစားတယ်ဆိုတာမသေချာဘူး။
ဧပြီ 6, 2012 မှာ 11: 07 pm တွင်
ကောင်းပြီထား! ရှာဖွေခြင်းသည်သေသည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်သဘောတူသည်။ ငါသေချာပေါက်သေဆုံးသည့်စနစ်ကိုကစားရန်ရှေးဟောင်းလူများကိုငှားရမ်းနိုင်စွမ်း! 🙂
ဧပြီ 7, 2012 မှာ 8: 14 AM
ကောင်းသော SEO ဆိုတာကတော့ဂိမ်းကစားတာမဟုတ်ပါ
ဧပြီ 7, 2012 မှာ 4: 47 pm တွင်
…တော့ဘူး။ ရှည်လျားလွန်းသည်က backlinkers cheat နှင့်အနိုင်ရခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်!
22:2012 pm မှာအောက်တိုဘာ 8, 19
သင်၏ဝေါဟာရများကိုဤနေရာတွင်ပြောင်းလဲရန်လိုအပ်သည်။ ဒေါက်ဂလပ်စ်၊ backlinker သည်လူမည်း ဦး ထုပ် SEO ဖြစ်သည်။ Backlinking သည်၎င်း၏အမှန်တကယ်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်မဟုတ်ပါ။ နောက်ကျော ဦး ထုပ်နည်းဗျူဟာကိုအသုံးပြုခြင်းစနစ်လိမ်နှင့်ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အောင်မြင်သော SEO ဆိုသည်မှာမဟာဗျူဟာမြောက်များစွာမှတစ်ဆင့် link များကိုတက်ကြွစွာ ဦး တည်သည်
Andrea Edwards က
ဧပြီ 9, 2012 မှာ 5: 16 AM
ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ (ဂ်) သုံးခုသည်နောက်ပြန်လင့်ခ်များဖြင့် spam များကိုခံနေရသောကြောင့်ဤလမ်းကြောင်းသစ်သည်ဖက်ရှင်ကျသွားသည်ကိုတွေ့ရ။ ကျွန်ုပ်အလွန်ပျော်မည်! နောက်ဆုံးမှာတော့တကယ့်အကြောင်းအရာအကြောင်းပါ။
26:2012 pm မှာအောက်တိုဘာ 6, 30
ခုနစ်လအကြာနှင့်ဘလော့ဂ် spam လင့်များလာမယ့်! ဂူဂဲလ်ရှာဖွေမှုမှပြန်လာသည့်အကောင်းဆုံးရလဒ်များကိုဂရုပြုရန်နှင့်ဂရုစိုက်သောငါတို့အတွက်စစ်အစိုးရအသစ်သည်ကောင်းမွန်သည်
ဧပြီ 9, 2012 မှာ 5: 48 AM
ရှာဖွေခြင်းသည်သေချာသလောက်မဟုတ်ပါ၊ သို့သော်လူမှုကွန်ယက် ၀ က်ဘ်ဆိုက်များကိုပိုမိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်အတူပြောင်းလဲလာသည်။ Twitter ကိုနှောင်းပိုင်းတွင်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အဖြစ်အသုံးပြုသည်။ 🙂
ဧပြီ 9, 2012 မှာ 10: 51 AM
ဂူးဂဲလ်သည်၎င်း၏သုံးစွဲသူများနှစ်သက်ရာကိုနှစ်သက်သည်။ ဒါကြောင့်သင်ဟာသင့်ရဲ့ပစ်မှတ်ထားတဲ့ပရိသတ်အတွက်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်မလုပ်ချင်ပါ။ သင်ပစ်မှတ်ထားသောပရိသတ်များအကျိုးခံစားရမည့်သင်သိသောအကြောင်းအရာများကိုဖန်တီးပါ။
ဧပြီ 10, 2012 မှာ 1: 04 pm တွင်
ထိပ်တန်းအဆင့်နှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာခွဲဝေမှုများအကြား“ ကျိုးကြောင်းဆက်နွှယ်မှု” ကိုပြသသောလေ့လာမှုများကိုလူများတွေ့မြင်ရခြင်းကိုကျွန်ုပ်နှစ်သက်ပါသည်။ ကိစ္စတော်တော်များများတွင်ဤအချက်သည်အားနည်းနေဆဲဖြစ်သည်။ လူမှုရေးဆိုင်ရာမျှဝေခြင်းသည်မျက်လုံးများပိုမိုများပြားလာခြင်းစသည်ဖြင့်အခြားသောလည်ပတ်မှုများ၊ လည်ပတ်မှုများ၊ အလယ်အလတ်ချိတ်ဆက်မှုများစသည်တို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သို့သော်၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အချက်အလက်တစ်ခုအနေဖြင့်၎င်းတို့သည်ရှာဖွေမှုရလဒ်များကိုအဓိကအားဖြင့်မည်ကဲ့သို့အကျိုးသက်ရောက်သည်ကိုလေ့လာမှုမတွေ့ရပါ။ လမ်း။ သူတို့နောက်ဆုံးမှာလိမ့်မည်မှာသေချာသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အသစ်သောအရာများ SEO ဟူသောအတိုကောက်ကိုသာစတင်ထည့်သွင်းနိုင်ပါကအမှန်တကယ်ငြင်းခုံစရာရှိသည်။ Search Engine Optimization ကိုဆိုလိုသည်။ ကွန်ရက်စာမျက်နှာတစ်ခုပေါ်တွင်ပြောင်းလဲခြင်းသည်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များအတွက်စာမျက်နှာကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေခြင်းနှင့်အနည်းငယ်သာသက်ဆိုင်သည်။ ဒါကကုမ္ပဏီတွေအတွက်အရေးမကြီးဘူးလို့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်ငါကမရေမတွက်နိုင်တဲ့ပို့စ်များကိုအသစ်သောအရာများကို SEO ဆိုသည်မှာဘာလဲဆိုတာသူတို့နားလည်သဘောပေါက်မှုမရှိသည့်တိုင်အသစ်ထည့်လိုက်သည်ကိုတွေ့ရသည်။
အနှစ်သာရအားဖြင့်၊ ဆလိုက်ကုန်းပတ်၏သဘောသဘာဝကိုကျွန်ုပ်လုံးဝသဘောတူသော်လည်း“ နောက်ကျောလင့်ခ်များ” သည်သဘောတူစာချုပ်ရေးသားခြင်းကဲ့သို့သင်၏စီးပွားရေးကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတော့မည်မဟုတ်ဟုကျွန်ုပ်နှင့်သဘောမတူပါ ၎င်းသည်များစွာသောအရာပေါ်တွင်မူတည်သည်။ သင်နှစ်ခုလုံးလိုအပ်သည်။
2:2012 pm တွင်သြဂုတ်လ 8, 22
သင် ******* စမတ်။ အတိအကျအဘယ်သူမျှမ causation ရှိပါသည်။ ထိပ်တန်းအဆင့်ရလဒ်များသည် Facebook ကိုပိုမိုနှစ်သက်သည်။ အကြောင်းမှာ၎င်းတို့သည်အသွားအလာပိုများလာခြင်းနှင့်စတင်ရန်အရည်အသွေးပိုမိုမြင့်မားခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည် (အရည်အသွေးသို့ဘာသာပြန်သောအချက်များသည်မြင့်မားသောရှာဖွေမှုအဆင့်သို့ပြောင်းလဲပေးသည်) ။ ဟုတ်ပါတယ်ပြိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများအတွက်ထိပ်တန်းအဆင့်ရလဒ်တွေမှာလူမှုရေးလုပ်ရပ်တွေပိုများတယ်၊ ဒါပေမယ့်လူမှုရေးလုပ်ရပ်ကြောင့်ထိပ်ဆုံးနေရာမှာမထားပါဘူး။ သူတို့ကလူမှုရေးလုပ်ရပ်တွေပိုများတယ်၊ ငါဒီအမျိုးအစားကိုအမျိုးအစားများစွာနဲ့စမ်းသပ်ပြီးပြီ၊ အကြောင်းပြချက်မရှိဘူး - မင်းကိုမင်းကိုခန့်မှန်းပြီးပို့ပေးချင်တယ်။
2:2012 pm တွင်သြဂုတ်လ 8, 48
ခေါင်းပေါ်မှလက်သည်း - သင်လုံးဝသဘောတူသည်
17:2012 pm တွင်စက်တင်ဘာ 12, 37 မှာ
@searchbrat: disqus @etelligence: disqus @ twitter-15353560: disqus Google သည် ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင်လူမှုရေးကိုဒီဗီဒီယိုတွင်အဆင့်သတ်မှတ်ရန်အခွင့်အာဏာကိုဆုံးဖြတ်ရန်အသုံးပြုခဲ့သည်ကိုအတည်ပြုခဲ့သည်: http://www.youtube.com/watch?v=ofhwPC-5Ub4
လတ်တလော algorithm အပြောင်းအလဲများကပိုပြီးအကြီးအကျယ်အဆင့်သတ်မှတ်ရန်ဆက်လက်။ Branded3 ဟာ Twitter Retweets ကိုသုံးပြီးရိုးရှင်းတဲ့စမ်းသပ်မှုတစ်ခုလုပ်ခဲ့တယ်။ http://www.branded3.com/tweets-vs-rankings
တဖန်ငါ backlinking ပေါ်တွင်သင်နှင့်အတူအကြွင်းမဲ့သဘောမတူ။ Backlinking အစီအစဉ်များသည်ဝဘ်ကိုညစ်ညမ်းစေပြီးဆင်းရဲသောစာမျက်နှာများကိုပိုမိုမြင့်မားစေသည်။ backlinks သည်သဘာဝမဟုတ်သည့်အခါ Google သည် Webmaster Tools အတွင်းရှိ webmaster များကိုသတိပေးနေသည်။ အကယ်၍ ၎င်းတို့မရှိသေးပါကသူတို့သည်သင်၏အဆင့်ကိုအပျက်သဘောသက်ရောက်လိမ့်မည်။ backlink များကိုထုတ်လုပ်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာသဘာဝအားဖြင့်၎င်းတို့ကိုထုတ်ပေးသောအကြောင်းအရာများထုတ်လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ သင်ဖောက်သည်များအတွက်ပြုလုပ်နေပါကသင်သည် Google ၏သတ်မှတ်ချက်များကိုချိုးဖောက်နေပြီး၎င်းသည်သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူကိုပြန်လာစေလိမ့်မည်။
22:2012 pm မှာအောက်တိုဘာ 8, 12
backlinking (အနက်ရောင် ဦး ထုပ်နည်းဗျူဟာ) နှင့်ခိုင်မာသော link ကို - တည်ဆောက်ခြင်းမဟာဗျူဟာများအကြားခြားနားချက်ရှိပါသည်။ သင် backlinking မကောင်းတဲ့နှင့်တော့ဘူးအများကြီးအဖြစ်ရေတွက်မထားဘူးပြောနိုင် သငျသညျတိကျတဲ့ဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်။ သင်၏စာဖတ်သူများအား backlinking မကောင်းကြောင်းပြောခြင်းသည်အလွန်မရေမရာဖြစ်နေပြီးလှည့်စားနိုင်သည်။ ဂူးဂဲလ်ကအရည်အသွေးကောင်းတဲ့ link တွေမဟုတ်ဘဲ spammy link တွေကိုပစ်မှတ်ထားတယ်။ ဒါကြောင့်အရည်အသွေးနိမ့်တဲ့ link တွေကို ၀ ယ်တာဟာမကောင်းတဲ့နည်းဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်ပေမယ့်သင် link တွေလုံးဝရယူဖို့လိုတယ်။ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များရှိနေသမျှ Search Engine Optimization ရှိလိမ့်မည်။ အဆိုပါနည်းဗျူဟာများနှင့်မဟာဗျူဟာများပြောင်းလဲလိမ့်မယ်ဒါပေမယ့်ဒါဟာသေပြီဟုမဆိုလိုပါ!
မတ်လ 28, 2013 မှာ 12: 25 AM
နောက်တဖန်ကြိုးစား, ကျိုင်းကောင်, backlinking အနက်ရောင် ဦး ထုပ်နည်းဗျူဟာမဟုတ်ပါဘူး။ သင် seo လုပ်တဲ့သူကိုမပြောပါနဲ့။
မတ်လ 28, 2013 မှာ 8: 04 AM
တစ် ဦး ကသဘာဝ backlink မဟုတ်ပါဘူး, တစ် ဦး ပေးဆောင် backlink ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျ backlink မှပေးဆောင်ခံရလျှင်သင်အနက်ရောင် ဦး ထုပ်ပါပဲ။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်“ SEO လုပ်သည်” ဟုလူများကိုမပြောပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ကကျွန်ုပ်တို့သည်စီးပွားရေးရလဒ်များရရှိကြောင်းပြောပြီး SEO အတိုင်ပင်ခံများမိတ်ဆက်ပေးသောပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်သည်။
ဧပြီ 10, 2012 မှာ 2: 36 pm တွင်
အကြောင်းအရာများ၏ထိရောက်မှုကိုအသိပေးသည့်မရေမတွက်နိုင်သောဘလော့ဂ်များကိုဖတ်ရှုပြီးဖြစ်သည်။ အကြောင်းအရာ, အကြောင်းအရာ, အကြောင်းအရာ !!! ငါသဘောတူပေမယ့်ငါတကယ်စျေးကွက်သမားတွေကသူတို့ရဲ့ဖောက်သည်တွေကိုစိတ် ၀ င်စားစရာအချက်အလက်တွေပေးပြီးကုမ္ပဏီရဲ့ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုကြည့်ရှုဖို့ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုအမှန်တကယ်ဖြိုခွဲလိုက်တာကိုတွေ့ချင်ပါတယ်။
အကြောင်းအရာသည်အဓိကဖြစ်ပါက“ ကောင်းသော” အကြောင်းအရာကိုသင်မည်ကဲ့သို့သတ်မှတ်သနည်း။
ဧပြီ 10, 2012 မှာ 6: 45 pm တွင်
ငါ့အတွက်တော်တော်လေးရိုးရှင်းပါတယ် အကြောင်းအရာကောင်းဆိုတာ visitors ည့်သည်တွေကိုသင်လုပ်စေချင်တာကိုလုပ်ဖို့တွန်းအားပေးတဲ့အကြောင်းအရာပါ။ ကုမ္ပဏီတိုင်းအတွက်ကွဲပြားခြားနားနိုင်သည်။ အချို့သောကုမ္ပဏီများအတွက်ဗီဒီယိုတိုများ အခြားသူများအတွက်မူ၎င်းသည်ရှည်လျားသောကော်ပီဖြစ်သည်။ သင့်၏အဖြစ်အပျက်များနှင့်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများအားလုံးကိုစနစ်တကျစီစစ်ပြီးအကဲဖြတ်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ အရာအားလုံးကိုကြိုးစားပါ။ အကောင်အထည်ဖော်ပါ၊ စမ်းသပ်ပါ၊
ဧပြီ 12, 2012 မှာ 6: 24 AM
အတိအကျ အကြောင်းအရာဘုရင်ဖြစ် ယခင်ကထက်ယခု။ သင့်တွင်အကြောင်းအရာများမကောင်းပါက SEO-Campaign မပါဘဲသင်၏ site သည် visitors ည့်သည်များနှင့် link များကိုဆွဲဆောင်လိမ့်မည်။ မတူကွဲပြား။ သတင်းအချက်အလက်နှင့်ထူးခြားသည့်အကြောင်းအရာများကိုရေးပါ။
ဧပြီ 16, 2012 မှာ 8: 08 AM
အောက်ဖော်ပြပါသော့ချက်စာလုံးများအစား၊ လူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကိုစာရေးသင့်သည်။ အဆုံးတွင်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သည်လူများနောက်လိုက်ပြီးသော့ချက်စာလုံးများမဟုတ်ပါ။
22:2012 pm တွင်ဇူလိုင်လ 2, 51
စက်တင်ဘာ 2, 2012 မှာ 5: 30 AM
အံ့သြဖွယ်ရာ post ။ သင့်ရဲ့ကောင်းတဲ့ဝေမျှမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
စက်တင်ဘာ 11, 2012 မှာ 6: 53 AM
စာရေးဆရာတစ်ယောက်အနေနဲ့ဂူဂဲလ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုကျွန်တော်တကယ်သဘောကျတယ်၊ ဒါပေမယ့် အကယ်၍ ကျွန်ုပ်ရဲ့ကုမ္ပဏီရှုထောင့်ကကြည့်ရင် SEO ဟာမကောင်းဘူးမဟုတ်လား။
အက်ဒွပ် Chamberlain- ဘဲလ်
စက်တင်ဘာ 19, 2012 မှာ 4: 26 AM
ဆိုရှယ်မီဒီယာ၏အမှတ်တံဆိပ်အဖြစ်သင်ထုတ်လုပ်သည့်အကြောင်းအရာသည်သင့်ပစ်မှတ်ထားသောပရိသတ်နှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိပါကသက်ဆိုင်မှုမရှိတော့ပါ။ သင်ပြောချင်တာကိုဆိုရှယ်မီဒီယာစျေးကွက်တစ်ခုအနေနဲ့ပြောနိုင်ပေမယ့်လူတွေကမင်းပြောတာကိုနားထောင်ဖို့စိတ်မ ၀ င်စားဘူးဆိုရင်သင်ဟာအခြေခံအားဖြင့်ဆီလျှော်မှုမရှိတဲ့အဖြူရောင်ဆူညံသံကိုမှတ်သားနိုင်မှာမဟုတ်ဘဲကော့တေးလ်ပါတီမှာသတိမပြုမိဘဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ သို့မဟုတ်အရက်မပါဘဲပါတီ။
ပြmediaနာကဆိုရှယ်မီဒီယာ“ ကျွမ်းကျင်သူများ” ကများလွန်းလှသည်ဟုပြောဆိုခြင်းမပြုမီအမှန်တကယ်စဉ်းစားတွေးတောသူတစ် ဦး ပြောခဲ့ပြီးသောအရာ (သို့) အနည်းဆုံးနေရာအနှံ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမတိုင်မီအနည်းဆုံးစဉ်းစားမိသည့်ဆိုရှယ်မီဒီယာ“ ကျွမ်းကျင်သူများ” သည်ပညာမဲ့စွာထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်နေခြင်းဖြစ်သည်။ နှင့်အွန်လိုင်းမီဒီယာဝါဒဖြန့်။ ဤအရာသည်အကောင်းဆုံးဘလော့ဂ်ဂါများ (သို့) အခြားသူတစ် ဦး ၏အကြောင်းအရာများကိုကူးယူခြင်းနှင့်ကူးရေးခြင်းဖြင့် ၀ င်ငွေမရသည့်အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းပြုရန်ကြိုးစားနေခြင်းမဟုတ်သည့်အကြောင်းအရာများမှူးများဖြစ်သည်။
စက်တင်ဘာ 22, 2012 မှာ 2: 47 AM
SEO ဆိုသည်မှာ spam ထက်ပိုသည်။ အချိတ်အဆက်များသည်ယခုနှင့်အနာဂတ်တွင်အရေးကြီးသော်လည်းအရည်အသွေးမြင့်မားသောတောင်းဆိုမှုများရှိနေသည်။
မတ်လ 28, 2013 မှာ 12: 27 AM
link အများစုသည် spam များသာဖြစ်သည်။
စက်တင်ဘာ 28, 2012 မှာ 2: 37 AM
ဒေါက်ဂလပ်ရေးပါ။ အစပိုင်းမှာတော့ SEO ဆိုတာကိုပြောဖို့အသစ်တစ်ခုကိုငါပုတ်ချင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ငါ post တစ်ခုလုံးကိုဖတ်ပြီးမင်းနဲ့သိပ်သဘောတူတယ်။ ကူဒို!
1:2012 pm မှာအောက်တိုဘာ 8, 51
SEO ဆိုတာသေပြီမဟုတ် ငါသဘောမတူဘူး ယခုအချိန်သည်မဟာဗျူဟာများကိုပြောင်းလဲရန်အချိန်ဖြစ်သည်။ ဒါပဲ။
6:2012 pm မှာအောက်တိုဘာ 4, 59
အလွန်ကောင်းသောအကြောင်းအရာ၊ SEO သည်သေပြီမဟုတ်ပါ🙂
12:2012 pm မှာအောက်တိုဘာ 5, 45
SEO ဆိုသည်မှာသေသည်မဟုတ်၊ ၎င်း၏တိုးတက်ပြောင်းလဲနေဆဲဖြစ်သည်။ Nice link ကိုငါးစာ😉
15:2012 pm မှာအောက်တိုဘာ 5, 20
19:2012 pm မှာအောက်တိုဘာ 3, 33
ကျွန်ုပ်သည် Google ကဲ့သို့သောရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များအတွက်“ အကြောင်းအရာသည်ရှင်ဘုရင်” ဖြစ်သော်လည်းကောင်းမွန်သောအချိတ်အဆက်များသည်အဆင့်သတ်မှတ်ရန်အရေးကြီးကြောင်းသဘောတူသည်။
23:2012 pm မှာအောက်တိုဘာ 6, 55
SEO သည်သေပြီ .. နောက်ထပ် clueless blogger …ဝမ်းနည်းပါသည်
23:2012 pm တွင်အောက်တိုဘာ 12, 15
ငါဟာ clueless blogger Steve တစ်ယောက်ပါ။ “ SEO အေဂျင်စီများ” ဟုခေါ်သည့်သေလုဆဲဆဲအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်၏အေဂျင်စီသည်ကြီးထွားလာပြီးသူတို့၏စီမံခန့်ခွဲမှုမှားယွင်းနေသောဖောက်သည်များအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိနေသည်။
6:2012 pm မှာနိုဝင်ဘာ 3, 34
LOL: အဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်ကအဖြစ်အပျက်ပြီးနောက် SEO ဆိုသည်မှာမေ့မြောခြင်းသာဖြစ်သည်ဟုထင်သည်။ ပြီးတော့ "content is king" ဟုမှေးမှိန်သောဟောင်းနွမ်းသောလူဟောင်းများနှင့်လည်းသဘောတူသည်။ Google, ထိုကဲ့သို့သောမည်သည့်ကုမ္ပဏီ, စာအိတ်တွန်းအားပေး "ကြိုးစား" ဖို့ခညျြနှောငျနေသည်။
20:2012 pm မှာနိုဝင်ဘာ 5, 05
15:2013 pm မှာဇွန် 4, 11
နေရာကောင်း SEO ဆိုသည်မှာ
ဇွန် 18, 2013 မှာ 9: 50 pm တွင်
စက်တင်ဘာ 23, 2013 မှာ 1: 59 AM
၃။ Bombard အသုံးပြုသူအားဤဆောင်းပါးအားမျှဝေရန်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်။
စက်တင်ဘာ 23, 2013 မှာ 10: 32 AM
22:2013 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 2, 55
ဤရေးသားခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ငါ SEO နှင့်ပတ်သတ်သောပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပြောတာကိုကျွန်တော်ငြီးငွေ့ပါသည်။
ဒီဇင်ဘာ 5, 2013 မှာ 1: 25 AM
ဒီဆောင်းပါးကဘာလဲဆိုတာကိုသိဖို့ Google SEO ကိုကျွန်တော်မလိုအပ်ပါဘူး။ ငါသိသင့်သိသမျှကိုရှာဖွေနိုင်ခဲ့တယ်။ အဲဒါဟာအသည်းအသန်ကြိုးစားဖို့ကြိုးစားနေပေမယ့်ဘယ်တော့မှတကယ်ဖြစ်မှာမဟုတ်တဲ့အတိုကောက်ဖြစ်တယ်။
ဒီဇင်ဘာ 9, 2013 မှာ 1: 52 AM
Bahahaha ဒီ Hilary ဖြစ်ပါတယ်။ Pesach Lattin သည်ခဏတာပြန်လုပ်ခဲ့သည့်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုသတိရစေသည်။ ဘာလို့ထင်လဲ?!! အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည် SEO ဖြစ်သည်။ စည်းမျဉ်းများကိုပြောင်းခြင်းသည်ဂိမ်းကိုမပြောင်းလဲပါ။ ဒါဟာဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်လို့ခေါ်တယ်။ ကျနော်တို့နေဆဲဤနေရာတွင်ကျော်ဘတ်စကက်ဘောကစားနေကြသည်။
22:2015 pm တွင်အောက်တိုဘာ 4, 24
yup က၎င်း၏သေပြီ ဤနေရာတွင်ရှင်းပြနောက်ထပ်အကြီးအဆောင်းပါး။ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များသည်ရှုပ်ထွေးပြီး၎င်းတို့သည်အရာများပြောင်းလဲခြင်း (algorithms etc) သည်ပိုမိုရှုပ်ထွေးသည်။ လူမှုမီဒီယာသည်မည်သည့်အသုံးပြုသူမှသူတို့အလိုရှိသည့်အကြောင်းအရာများကိုထုတ်ပေးသည်ကိုပိုမိုထိရောက်စွာဆုံးဖြတ်သည်။ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များကိုဖေ့စ်ဘွတ်ခ်နှင့်တွတ်တာတွင်လည်းထည့်သွင်းထားသည်။ ထို့ကြောင့် Google ကိုအဘယ်ကြောင့်လိုအပ်သနည်း။ ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်သင်လိုအပ်သည့်မည်သည့်ကုမ္ပဏီနှင့်အချက်အလက်ကိုမဆိုရှာနိုင်သည်
Abhishek Sharma က
1:2016 pm မှာဇွန် 3, 22
မျှဝေခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အခုရှုပ်ထွေးနေပြီ။ တစ်ယောက်က SEO ကသေပြီမဟုတ်လို့ SEO တစ်ယောက်ကသေပြီလို့ပြောတယ်။ ဘယ်ဟာမှန်လဲ
1:2016 pm မှာဇွန် 11, 00
SEO သည်ယခုတွင်အားလုံးပါ ၀ င်ပြီးကျွမ်းကျင်သူများလိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သိသောစင်ကြယ်သော SEO ကုမ္ပဏီအများစုသည်ကျော်လွှားသွားကြပြီဖြစ်သည်။ ကျန်ရှိနေသေးသောအချက်အလက်များမှာအေဂျင်စီများဖြစ်ပြီးပိုမိုကျယ်ပြန့်သောရုပ်ပုံလွှာကိုနားလည်ပြီးအကြောင်းအရာများ၊ လူမှုရေး၊ မိုဘိုင်းနှင့် PR ဗျူဟာများမည်သို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည်ကိုနားလည်သောအေဂျင်စီများဖြစ်သည်။
17:2016 pm မှာအောက်တိုဘာ 8, 02
မူအရမူကျွန်ုပ်သည်စိတ်ဓာတ်၏အဓိကအချက်ကိုသဘောတူသည်။ သို့သော်“ SEO သေပြီ” ကိုမေ့သွားပြီး“ SEO တိုးတက်ပြောင်းလဲလာပြီ” အကြောင်းထပ်မံစဉ်းစားပါ။ အကယ်စင်စစ်သင်တို့သည်ရှေးဟောင်း SEO (သော့ချက်စာလုံးပေါင်း laced backlinks နှင့် / သို့မဟုတ်သော့ချက်စာလုံးများ stuffing ဝဘ်ဆိုက်) တစ် ဦး တံခါးကိုအဖြစ်သေပြီ, ဒါပေမယ့်ငါ GOOD SEO ဆိုသည်မှာ (အများစု SEO ဆိုသည်မှာဆန့်ကျင်ကဲ့သို့) အခြားအမည်အားဖြင့် UXO ကြောင်းငြင်းခုန်ဖို့တရားမျှတထင်ပါတယ်
၎င်းသည်ပထမ ဦး ဆုံးထိတွေ့မှုမှအသုံးပြုသူ၏အတွေ့အကြုံကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည် (လူအများထင်မှတ်သကဲ့သို့အပြောင်းအလဲသို့မဟုတ်အဆက်အသွယ်သို့မဟုတ်“ ဤတွင်ရည်မှန်းချက်ထည့်သွင်းခြင်း” တွင်အဆုံးသတ်မည်မဟုတ်) markup နှင့် commonsense“ optimization” သည်ကောင်းမွန်သောလက်လှမ်းမှီသော web တည်ဆောက်မှုနှင့်ရိုးရှင်းသောသာမန်အသိတရားတို့နှင့်များစွာဆက်စပ်သည်။
ကျနော့်အမြင်မှာပြသနာကလူအများစုက SEO ဆိုတာ silo မှာမင်းကိုသီးခြားလုပ်တဲ့အလုပ်လို့ထင်ကြတာပါ။ တကယ်တော့သင်ကမှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် SEO ဆိုတာမင်းလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အတိုင်းစီးပွားရေးနဲ့အတူသွားရင်မင်းသဘာဝကျကျလုပ်လိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့ website အတွက်။ ၎င်းကိုစာလုံးပေါင်းစစ်ဆေးခြင်းကဲ့သို့သော“ စျေးကွက်ရှာဖွေရေး” လှုပ်ရှားမှုနှင့်“ တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေး” အဖြစ်မှတ်ယူသင့်သည်။